कसरी एक ट्रेन साहसिक अझ बढी बजेट-मैत्री बनाउन को लागी | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > कसरी एक ट्रेन साहसिक अझ बढी बजेट-मैत्री बनाउन को लागी
ट्रेन द्वारा यात्रा एक मनमोहक अनुभव हो कि दर्जनौं पुरस्कार प्रदान गर्दछ. ट्रेनहरूले तपाईंलाई ल्यान्डस्केपको नजिक ल्याए: तपाईले भेडाहरूको बगाल चरिरहेको देख्नुहुने छैन वा एयरबसको बीचको सिटबाट ट्युलिप्सको खेतको गन्धमा सास लिनुहुनेछैन।. ट्रेनहरूले तपाईंलाई बाहिरी इलाकामा पुग्न सक्छन् र शहरको बिचमा तपाईलाई जम्मा गर्नुहोस्. तपाईं विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ र आराम र एक बाट कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ सहज दूरी साथी यात्रीहरूसँग जब तपाईं रेल चढ्नुहुन्छ. कोही भन्छन कि रेल यात्रा यसको आफ्नै इनाम हो किनभने हरेक चोटि हामी ट्रेन चढ्छौं, हामी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग र जीवन्त परम्परा कायम राख्न मद्दत गर्दछौं. तर आज हामी यहाँ अर्को प्रकारको इनामको बारेमा कुरा गर्न आएका छौं - जुन तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछ अधिक ट्रेन सवारी लिनुहोस् र विश्वको विस्तृत फराथ हेर्नुहोस् वा कसरी एउटा ट्रेन साहसिक कार्य अझ बढी बजेट-अनुकूल बनाउन. तिनीहरू यात्रा क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरू द्वारा जारी इनाम को प्रकार हो. र ती स collecting्कलनहरू तपाईले छुट्टाहरूको लागि सपना हेर्ने स्मार्ट रणनीति हुन सक्छ.
1. कसरी एक ट्रेन साहसिक अझ बढी बजेट-मैत्री बनाउन को लागी: यात्रा क्रेडिट कार्ड फरक छन्
व्यक्ति सामान्यतया दुई कारणका लागि परम्परागत क्रेडिट कार्डहरू उनीहरूको वालेटमा राख्छन्. कहिलेकाँही हामी क्रेडिट कार्ड बोक्दछौं हाम्रो जेबमा धेरै नगद हुनबाट जोगिन, यो अभ्यास जोखिमपूर्ण हुन सक्छ, विशेष गरी जब हामी यात्रा गर्छौं. क्रेडिट कार्डले हामीलाई खरीदको लागि भुक्तान गर्न पनि मद्दत गर्दछ जुन हामी एकै पटकमा तिर्ने क्षमता लिन सक्दैनौं, तिनीहरू आवश्यक वा राम्रो-हड्स हो. त्यो पहिलो अभ्यास एक उत्तम क्रेडिट तरीकाले एक यात्रा क्रेडिट प्रयोग गर्न को लागी हो. वास्तबमा, तपाईको यात्रा क्रेडिट कार्डबाट पुरस्कार कमाउने उत्तम तरिका यसलाई प्रयोग गर्नु नै हो, विशेष गरी ठूला खरीदहरूको लागि. तर दोस्रो अभ्यास ट्राभल क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दा खतरनाक हुन सक्छ. किन? किनभने, जबकि औसत ब्याज दर क्रेडिट कार्ड उद्योग द्वारा चार्ज गरियो सम्पूर्ण रूपमा — र तपाइँ धेरै पाउन सक्नुहुन्छ जुन कम चार्ज गर्दछ — हो 14.52%, केहि यात्रा क्रेडिट कार्ड माथि भन्दा माथि चार्ज गर्दछ 25%. र धेरै यस माथि मा मोटा वार्षिक शुल्क चार्ज. यात्रा क्रेडिट कार्डमा उच्च ब्यालेन्स बोक्दा तपाईंको ब्याज शुल्कहरू कुनै समय बिना नै रैक गर्दछ. त्यसैले यात्रा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने पहिलो नियमले तपाईलाई एकल बिलि cycle चक्रमा भुक्तान गर्न सक्ने भन्दा बढी शुल्क लिनु हुँदैन।.
2. यात्रा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दाका फाइदाहरू
यात्रा क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरू तपाईंको व्यवसाय गर्न चिन्तित छन्. तिनीहरूले अन्य कम्पनीहरु संग प्रतिस्पर्धा यो कमाउन को लागी. एक अद्वितीय र सशक्त इनाम कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भनेको उनीहरूले बजारमा आफूलाई छुट्याउन र ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रमुख तरिका हो.
लाभहरू गमूट चलाउँछन्. केही कम्पनीहरूले तपाइँलाई बारम्बार उड्ने माईलहरू पुरस्कृत गर्छन्. मानौं मानौं तपाईं एक न्यू योर्क हुनुहुन्छ बोर्डोको स्वाद लिने योजना बनाउँदै, तपाईंको यात्राको पहिलो भाग सम्भवतः पेरिसको लागि उडान हो जुन तपाईंको यात्राको सब भन्दा ठूलो एकल खर्च हुन सक्छ. (त्यो होईन जब सम्म तपाईं केही धेरै दुर्लभ पुरानो स्वाद चाख्नुहुन्छ!) तपाईले बारम्बार उड्ने माईलहरू तपाईले कमाउनुहुन्छ कि एयरलाइन टिकट तपाईका लागि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ. केही यात्रा क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरूले उनीहरूको पुरस्कार संरचनाको भागको रूपमा वार्षिक साथी टिकटहरू समावेश गर्दछ, त्यसोभए तपाईं एक साथीलाई एक रोमाञ्चकतामा ल्याउन सक्नुहुन्छ. अन्य कम्पनीहरूले पुरस्कार प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको उडानलाई अझ रमाइलो बनाउँदछ, प्रथम श्रेणी अपग्रेडबाट विश्वव्यापी एयरपोर्टहरूमा एयरलाइन लाउन्जमा विशेष पहुँच. होटेल र रेस्टुरेन्टहरूमा छुट पनि केही यात्रा क्रेडिट कार्डहरूको इनाम संरचनामा आकृति दिन्छ.
3. कसरी एक ट्रेन साहसिक अझ बढी बजेट-मैत्री बनाउन को लागी: पर्कहरूको हाम्रो पिक
तपाईले कमाउन सक्नुहुने सब भन्दा लचिलो भत्ता तपाईको खरिदमा क्यासब्याक हो. को उत्तम यात्रा क्रेडिट कार्ड तिर्नु 2% तपाईंको सबै खरीदहरूमा फिर्ता. केहि को रूप मा आफ्नो कैशब्याक प्रतिशत वृद्धि 6% चयन कोटिहरूमा, हवाई किरा सहित, भोजन, र होटल खरीदहरू. यदि तपाईं नियमित रूपमा आफ्नो यात्रा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ - किराना र ग्यास जस्ता दैनिक चीजहरूको लागि पनि भुक्तान गर्न — नगद पुरस्कारहरू चाँडै थप्न सकिन्छ र तपाईंलाई मनपर्ने कुनै पनि यात्रा खर्च अफसेट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।, तपाईंको अर्को ट्रेन पास सहित. तर फेरि, यो केवल आफ्नो यात्रा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न को लागी समझ बनाउँछ यदि तपाईं प्रत्येक महिना आफ्नो शेष रकम तिर्न तयार हुनुहुन्छ भने.
4. यात्रा क्रेडिट कार्ड छनौट गर्न सल्लाहहरू
यात्रा क्रेडिट कार्ड प्राय: कुनै प्रकारको पोइन्ट प्रणाली प्रयोग गर्दछ तपाईले प्राप्त गरेका पुरस्कारहरू गणना गर्नका लागि र यी प्रणालीहरू जटिल हुन्छन्. पनि, केहि कार्डहरूले कम्तिमा कुनै खरीद गर्न सक्नु भन्दा पहिले कम्तिमा खरीदको आवश्यकता ल्याउँछ. उदाहरणका लागि, तपाइँले बनाउन आवश्यक हुन सक्छ $1000 वा अधिक तपाईं तीन महिना को अवधि मा खरीद मा अंक प्राप्त गर्न सुरु गर्न अघि. तपाईंको यात्रा क्रेडिट कार्डमा एयरलाइन टिकट राख्नु भनेको न्यूनतम भेट्न सजिलो तरिका हो. तर तपाईले त्यसलाई भेट्न पनि सक्नु हुन्छ तपाईको कार्ड प्रयोग गरेर केहि महिनाको लागी दैनिक खर्चहरुमा भुक्तान गर्न. तपाईका खरीद लक्ष्यहरू पुग्न प्रत्येक महिनाको बाटोमा हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न केवल आफ्नो खरीदहरूको ट्र्याक राख्न निश्चित गर्नुहोस्.
तपाईंको उत्तम शर्त भनेको तपाईंले स्याउलाई स्याउमा विचार गर्दै गर्नुभएको प्रत्येक कार्डको तुलना गर्नु हो. तपाईं यो उद्देश्यको लागि एक स्प्रिडशिट सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ सुनिश्चित गर्न को लागी तपाईं प्रत्येक कार्डको सबै सुविधाहरू क्याप्चर गर्दै हुनुहुन्छ र निष्पक्ष तुलना गर्दै हुनुहुन्छ।. रुचि APRs समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्, न्यूनतम खरीद आवश्यकताहरू, नगद प्रतिशत, र वार्षिक शुल्क तपाईंको गणनामा तपाईंको कार्ड चार्ज गर्दछ.
5. कसरी एक ट्रेन साहसिक अझ बढी बजेट-मैत्री बनाउन को लागी: एउटा अन्तिम सिफारिश
Wenderlust एक अपूरणीय आग्रह हुन सक्छ. यात्रा विज्ञहरूको रूपमा, हामी तपाईंलाई क्रेडिट लाई जिम्मेवार रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछौं. पनि, हामी तपाईंलाई यस ग्रहको लागि आफ्नो जिम्मेवारी विचार गर्न सोध्छौं. कम वातावरणीय प्रभाव छ कि यात्रा विकल्पहरू बनाउने, जस्तै रेल द्वारा यात्रा यसको सट्टामा तपाईंको अर्को गन्तव्य पत्ता लगाउनको लागि अटोमोबाईल द्वारा, स्थायित्वका सिद्धान्तहरूमा सत्य भएर यात्रा गर्नु भनेको एक तरिका हो.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईलाई युरोपमा छुट्टीको ट्रेनमा सहयोग गर्न हामी खुशी छौं.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "कसरी एक ट्रेन साहसिक अझ बढी बजेट-मैत्री बनाउन" तपाइँको साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-adventure-budget-friendly%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय ट्रेन मार्गहरू भेट्टाउनुहुनेछ - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, र तपाईं / pl गर्न / fr वा / डे र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
बजेट फ्रेंडली क्रेडिटकार्डहरू TrainAdventure रेल यात्रा यात्राCreditCards